Mpanamboatra sy mpamatsy kojakoja ao an-tokantrano - Orinasa mpanamboatra kojakoja ao an-trano China
Izy io dia faritra midadasika moka moka amin'ny alàlan'ny moka tadionay. Tsy maninona ny vatan'olombelona raha mamono moka. Fanamasinana Anion. Ampiasain'ny micro USB ary azo averina ary azo atao tsara ny mitondra any ivelany.
Sambo etona kely sy mora entina misy vilia seramika, vatan'ny materialy ambony PC. Fanosehana 2 na 1 maina sy lena amin'ny làlan-droa. Fanombohana bokotra hanombohana hanamorana ny mpampiasa. 110ml tanky lehibe misy rano, afaka manisy vy mandritra ny 8-10 minitra.
Modely sy azo ampiharina, mety raha ampiasaina mandritra ny fialamboly. Famandrihana USB, azo ampiasaina amin'ny toerana tianao. Miaraka amin'ny ranon-tsolika, azo antoka sy mahomby voajanahary, mety amin'ny fampiasana ny reny sy ny foetus. Jiro alina malefaka mafana, milamina sy ahazoana aina.10 ora fametrahana toerana. Mandroaka ny moka amin'ny fomba mahomby amin'ny famoronana 30m2 faritra fiarovana anatiny na 3 metatra ivelan'ny fiarovana.
Ny mpanadio ultrasonic firavaka miaraka amina endrika endrika tsy manam-paharoa, mikasika milamina toy ny hoditra zaza.
Fandidiana mora bokotra iray, fanakatonana fiara 5 minitra. 12V ambany malefaka vovoka & porofon-drano IP54 azo antoka, maharitra sy maharitra. Famolavolana tabataba ambany ambany, haavo ambany noho ny 60dB. Haben'ny finday kely, mety entina, ary azo ampiasaina ho boaty firavaka ihany koa. Mangataka solomaso, firavaka, famantaranandro, hareza, solonify, sns.
4-in-1 mop elektrika tsy misy tariby misy fonosana misy kodiarana roa no mitondra anao traikefa vaovao amin'ny fametahana / fanosehana / famolahana ny gorodona. Tsy misy tariby, mora entina miaraka amin'ny bateria Lithium 3200mAh azo averina, dingana efa ela. Savoka & poleta amin'ny gorodona: miaraka amina rano lehibe na solika savoka 300ml. Tabataba ambany noho ny 30dB. Azo esorina sy azo esorina ny lohan'ny mop Nano. Tsara ny manadio tasy hafa. Miaraka amin'ny hazavana LED mba hanampiana hanazava ny faritra maizina rehefa ilaina.
Multifunction mpanasa gorodona tsy misy tariby sy mpanadio banga dia fanadiovana vaovao mitambatra ao anatin'izany ny: fanasana lena sy fanasan-damba maina miaraka amin'izay; Fanadiovan-tena sy fiampangana miorina mifototra; Nisaraka ny rano madio sy ny fitoeran-drano maloto; Mahery suction hery sy fanasana mando tafiditra; Cordless natao miaraka amin'ny fonosana bateria azo esorina; 17-30 min ora mandeha amin'ny maody Standard / Max; Ny efijery LED hita maso amin'ny toeran'ny miasa; Jiro UVC namboarina ho an'ny bakteria sy famonoana bibikely vovoka; miasa ny fampahatsiahivana am-peo, ary mahafinaritra kokoa ho hita.